काठमान्डौँ । (एक दीन एउटा केटी भवीष्य हेर्न एउटा बाबाकोमा गइछ। केटी बाबालाइ सोध्दै) केटी :मलाई भवीष्य हेर्न सिकाइदिनुस ? बाबा ;आँखा बन्द गरेर आफ्नो गाला अगाडि गर केटी:नाइँ गर्दिन, तपाईं किस गर्नुहुन्छ बाबा:ल देखियो नि भवीष्य विस्तृत समाचार »
काठमाडौं । (स्कुलको एउटा बिल्डिङग मा आगो लागेछ । स्कुलको सबै बच्चा टाढा बाट हेर्दै “ल अब स्कुल आउनु परेन” भन्दै खुशी भईरहेका थिए तर त्यही बच्चाहरुको भिडमा एउटा बच्चा उदास थियो त्यो देखेर एउटा टिचरले सोधेछ )? टिचर : बाबु तिमी किन उदास छौ ? अरु सबै त खुशी भईराखेका छन त ! ? बिथार्थी : बिल्डिङग मा आगो लागेर के गर्नु सर तपाईं त…विस्तृत समाचार »
काठमाडौं । (काले र गोरे हस्पिटलमा रुदै बसेको देखेर अचम्म मान्दै च्यान्टे ः ओए ...गोरे किन रोको यार त..) ? गोरे : Blood test गर्न भनेर मेरो औला नै काटी दियो यार ..!! च्यान्टे : अनि काले त किन रुइरको ... काले : मेरो त Urine test गर्न पर्छ रे ...उ हु उ हु विस्तृत समाचार »
फेयर एण्ड लब्ली
काठमाडौं । ( तालिमको क्रममा सिपाहीहरु जम्प गरेर खोला पार गरिरहेका थिए । त्यसै क्रममा सिपाहीले उफ्रिदै भनेछ—) सिपाही : जय कालिमाता । ( कालिमाताले यो कुरा सुनेर भनिछन—) कालिमाता : तेरै आमा काली होला म त अहिले त फेयर एण्ड लब्ली पो लगाउँछु त ।विस्तृत समाचार »
काठमाडौं । ( राम कौसिमा बसेर गण्तिको होमवर्क गरि रहेको थियो । रामको छिमिकी अंकल राम भएको ठाउमा गएर रामलाई जिस्काउँदै प्रस्न? गर्न थाले ) छिमेकी अंकलः तिमीसँग रु. १०० छ र तिम्रो ड्याडीले रु. १०० तिमीलाई दिनुभयो भने जम्मा कति हुन्छ ? राम : रु. १०० नै हुन्छ । छिमेकी अंकल : तिमीलाई जोड हिसाबबारे केही पनि थाहा रहेनछ । राम : तिमीलाई मेरो…विस्तृत समाचार »
(राम खाना खाएर विद्यालय जान्छ । विद्यालयमा पहिलो घण्टी लाग्छ अनि गणित पढाउने सर आएछन । अनि सरले रामलाई उठाउदै सोधेछन ?) भन त राम १० मा १० जोड्दा कति हुन्छ ? राम : २२ सर । शिक्षक : फटाहा, कसरी ? राम : हिसाब नमिलेर सर ।विस्तृत समाचार »
छट्टु बच्चा र घन्टी
काठमाडौं । (एउटा बच्चा धेरैबेर देखि एउटा ढोका बाहिरको घण्टीको बटन थिच्ने कोसिस गर्दै थियो तर सकि रहेको थिएन, एउटा बूढो मान्छे त्यो देखेर बच्चाको अगाडी आएर सोधेछ ) बुढाः बाबु, तिमी के गर्दै छौ ? बच्चाः अंकल यो घन्टी बजाउन चाहान्छु । बूढाः (घन्टीको बटन थिच्दै) ल बाबु मैले बजाइदिए अब के गर्नु ? बच्चाः अब भागौँ..................................... विस्तृत समाचार »
शेरे र थर्मस
(एक दिन शेरे घुम्नको लागि बजार गएछ । बजारम हिन्दै गर्दा उसको आँखा थर्मसमा पुगेछ । उ त्यो थमर्स देखेर अचम्म मान्दै पसले साहु नजिक पुगेछ अनि उसले सोधेछ ) शेरेः साहुजी त्यो के हो ? साहुजिः त्यो थर्मस हो । यसमा तातो चिज राखे तातै रहन्छ , चिसो चिज राखे चिसै रहन्छ । शेरेः त्यसो भए एउटा दिनु न त । (शेरेले त्यो थर्मसमा…विस्तृत समाचार »
केटा र केटी रेस्टुरेन्टमा
केटा : I Love YOu केटी :I don't love you केटा :Think again केटी :I told you.No, no & no केटा : छुट्टाछुट्टै बिल ल्याउ है । केटी : Ok ok I love you too....विस्तृत समाचार »
असल प्रेमीहरुको अत्यन्तै मार्मिक कथा मन थामेर पढनुहोला
एक सुन्दर जोडि थिए ! केटा र केटि धेरै बर्ष माया प्रेम बसे पछि विवाह गर्छन , विवाह पछि त झन माया प्रेम पनि धेरै बड्दै जान्छ,दुबै जना धेरै नै खुशि र एक सुखि परिवारका साथ रमाउदै जिवन निर्वाह गरि रहेका हुन्छन। बिहान बेलुका श्रीमती पुजा पाठ गर्न गरेर सधै आफ्नो पतिको लामो आयु होश भनि भगवानसग प्रार्थना गर्थिन । अनि श्रीमान भने दिन भरि…विस्तृत समाचार »